ငြိမ်းချမ်းမှုဖြင့် သာသနာကို ချီးမြှောက်ခြင်း | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« မိတ္ထီလာအကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်ထဲက မင်္ဂလာဇေယျုံ ကျောင်းသားများ သတ်ဖြတ်ခံရမှု မှတ်တမ်း
ငြိမ်းချမ်းမှုဖြင့် သာသနာကို ချီးမြှောက်ခြင်း
March 20 at 6:38pm ·
ခရစ်တော်မပေါ်မီ ၂၆၈ ခုနှစ်ကတည်းက အိန္ဒိယနိုင်ငံ ထီးနန်းစိုးစံခဲ့သော အသောကမင်းကြီးအကြောင်းသည် အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါသည်။ သူသည် သိန်းချီသော တိုက်ပွဲကျသည့် ရန်သူအလောင်းများကိုကြည့်ပြီး တရားရကာ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကူးပြောင်းခဲ့သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်ကစပြီး ကျူးကျော်စစ်များကို မဆင်နွှဲတော့ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းသည့် မေတ္တာတရားကို ရင်ဝယ်ပိုက်ကာ ပြည်သူ၊ ပြည်သားများကို ရင်ဝယ်သားကဲသို့အုပ်ချုပ်သွားတော့သည်။ စစ်ပွဲများရပ်လိုက်သဖြင့် တိုင်းပြည်ကြီးပွားတိုးတက်လာသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ချီးမြှောက်သည့် ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်လာရုံမက အခြားဘာသာများကိုလည်း မဖိနှိပ်ဘဲထောက်ပံ့သည့် မင်းတစ်ပါးဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင်ပါ စာတင်ခဲ့ရသော မင်းဖြစ်သည်။
သူ့အကြောင်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ကမ္ဘာကျော်စာရေးဆရာကြီး အိတ်ခ်ျဂျီဝဲလ်က
“ သမိုင်းစာမျက်နှာများတွင် ထောင်ပေါင်းများစွာရှိနေသည် ဘုရင်၊ ဧကရာဇ်၊ မင်းညီမင်းသားများ၏ အမည်နာမများကြားတွင် အသောက၏အမည်နာမသည်တစ်စင်းတည်းသော ကြယ်တာရာအဖြစ် ထီးထီးကြီးပင် ၀င်းလက်တောက်ပနေသည်။ ဗော်လဂါမြစ်မှသည် ဂျပန်ပြည်အထိ အသောက၏အမည်နာမသည် အလေးအမြတ် အပြုခံရတုန်းပင်ရှိသည်။ တရုတ်ပြည်နှင့် တိဗက်ပြည်အပြင် အိန္ဒိယသည်ပင် သူ့အဆုံးအမ သြ၀ါဒများကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ပြီဖြစ်သော်လည်း သူ၏ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်မှုအစဉ်အလာကိုမှု ထိန်းထားလေသည်။ ကွန်စတင်တိုင်း၊ သျှာလမိန်းဆိုသောနာမည်များကို ကြားဖူးနားဝရှိနေသူများထက် သူ့ကိုတလေးတစား အမှတ်တရ ရှိနေကြသူများ၏ ဦးရေက ယနေ့ပို၍ပင်များပြားနေသည် “ ဟု မှတ်ချက်ပြုခဲ့ရသူဖြစ်သည်။
ထိုမင်းလက်ထက်တွင်သာသနာတော် သန့်ရှင်းစေရေးအတွက်သာသနာသက္ကရာဇ် ၂၃၅ နှစ်တွင် တတိယသင်္ဂါယနာကိုလည်း တင်ပေးခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ပြန့်ပွားရေးအတွက် ကိုးတိုင်း ကိုးဌာနသို့ သံဃာတော်များအား ဗုဒ္ဓဂါယာရှိဗောဓိညောင်ကိုင်းတစ်ကိုင်းစီပေးပြီး သာသနာပြုများအဖြစ် စေလွှတ်ခဲ့ခြင်းမှာ အသောက၏ အမြော်အမြင်ကြီးမှုပင်ဖြစ်တော့သည်။ သူ့ကြောင့်ပင် သီဟိုဠ်ကတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံ မွန်လူမျိုးများထံ ဗုဒ္ဓသာသနာ ရောက်လာခဲ့ခြင်းကြောင့် အသောကမင်းကြီး၏ ကျေးဇူးတရားများသည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့်လည်း ပတ်သတ်နေသည်ဟု ဆိုနိုင်ပေသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာသည် အကြင်နာတရား၊ မေတ္တာတရားများဖြင့် ကိုးကွယ်သူအပေါင်းကို လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့သည့် ဘာသာဖြစ်ပါသည်။ သာသနာနှစ်ပေါင်း ၁၅၀၀ အတွင်း၌လည်း သွေးတစ်ပေါက်မကျသော၊ အခြားဘာသာ သာသနာဝင်များအပေါ်တွင် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းကင်းမဲ့သော ဘာသာဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် သန်း ၅၀၀ ကျော် ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ် သက်ဝင်ယုံကြည်သူများ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အသောကမင်းကြီးသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို အလွယ်တကူ လက်ခံခဲ့သူမဟုတ်ပါ။ ဗုဒ္ဓတရားတော်ကို ထဲထဲဝင်ဝင်လေ့လာပြီး သုံးနှစ်ကြာမှသာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်သို့ ခံယူကူးပြောင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အသောကမင်းကြီးသည် အသက် ၇၂ နှစ်တွင် နတ်ရွာစံခဲ့သည်။ သူမကွယ်လွန်မီ ရေးထိုးထားခဲ့သော ကျောက်စာများအနက် ဘာသာတရားခွဲခြားခြင်းမပြုရန် သူရေးထိုးမှတ်တမ်းတင်ခဲ့မှုတစ်ခုမှာ လေးစားစရာ ကောင်းလှသည်။
“ မိမိကိုးကွယ်သည့် ဘာသာကိုချီးမြှင့်မြှောက်စား၍ အခြားဘာသာများကို ဖိနှိပ်ရှုပ်ချခြင်းကို မပြုလုပ်ရုံသာ မဟုတ်သေး။ ဤအကြောင်း ထိုအကြောင်းများကြောင့် အခြားဘာသာဝါဒများကို လေးစားချီးမြှင့်ကြရပေမည်။ ဤကဲ့သို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် မိမိ၏ဘာသာကို ကြီးပွားတိုးတက်စေပြီးလျှင် အခြားဘာသာတို့အားလည်း ကူညီထောက်ပံ့လေသည်။ ဤကဲ့သို့မလုပ်မူ မိမိဘာသာ၏ သင်္ချိုင်းကို မိမိတူးရာရောက်၍ အခြားဘာသာများကိုလည်း အန္တရာယ်ပြုရာရောက်ပေသည်။ မိမိကိုးကွယ်သည့် ဘာသာကိုသာချီးမြှင့်မြှောက်စား၍ အခြားဘာသာများကို ဖိနှိပ်ရှုတ်ချသူများသည် မိမိဘာသာကို ကြည်ညိုစိတ်ဖြင့် ငါ့ဘာသာ ဂုဏ်သိန်ထွန်းတောက်စေရမည်ဟုတွေးတောယူဆပြီး ပြုလုပ်ကြခြင်း အမှန်ဖြစ်ပေသည်။ သို့ရာတွင် ဤကဲ့သို့ ပြုမူဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် ၎င်း၏ဘာသာကို ပိုမိုလေးနက်စွာ အကျိုးယုတ် ပျက်ပြားစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် သာယာညီညွှတ်ခြင်းသည် မွန်မြတ်ပေသည်။ လူအပေါင်းတို့ မှတ်သားလိုက်နာကြလော့၊ အခြားသူများ၏ ဘာသာဝါဒများကို လေးစားကြားနာကြကုန်လော့ “ ဆိုသည့် အသောကကျောက်စာပါအချက်များကို အလေးထားဖတ်ကြစေလိုပါသည်။
ဗုဒ္ဓသည် ငါ့ဘာသာ၊ ငါ့လူမျိုး၊ ငါ့ကိုသာကိုးကွယ်စသည့် အစွန်းရောက်တရားများကို မဟောကြားခဲ့ပေ။ လွတ်လပ်စွာ တွေးတောကြံဆမှု၊ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ဆည်းကပ်မှုကို သည်းခံခွင့်ပြုတော်မူခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဟောကြားသည့် တရားတိုင်းသည် အဓမ္မတရားကိုဆန့်ကျင်သည့်တရားများဖြစ်ပြီး ဓမ္မကိုအလေးထား၍သာ အောင်မြင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓ၏တရားကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကြရသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကိုယ်တိုင်က ဗုဒ္ဓဘာသာ အနှစ်သာရဖြစ်သော ငြိမ်းချမ်းမှုကို ဆက်လက်တည်ဆောက်နိုင်ကြလိမ့်မည်ဟု မျော်လင့်မိပါသည်။
ရည်ညွှန်း- မြန်ဗုဒ္ဓဒသနာ၊ ဦးကိုလေး (ဇေယျာမောင်)
Source-မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့ထုတ် The Voice Daily ဂျာနယ်မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
This entry was posted on March 23, 2015 at 9:33 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.